आजको राशिफलमा के लेखेको छ तपाईंको भाग्य ? – Pahilo Page
आजको राशिफलमा के लेखेको छ तपाईंको भाग्य ?
१० बैशाख २०७६, मंगलवार १२:१५ 549 पटक हेरिएको
वि.सं. २०७६ बैशाख १० गते, मंगलबार । इश्वी सन् २०१९ अप्रिल २३ तारिख । नेपाल संवत ११३९ चौलागा । बैशाख कृष्णपक्ष । तिथि– चतुर्थी, १३ः४१ बजेउप्रान्त पञ्चमी ।
काम गर्ने अवसर प्राप्त भए पनि प्रतिफल प्रतीक्षा गर्नुपर्ला । अरूको भरपर्दा आफ्नो काम प्रभावकारी काम नहुन सक्छ । परिबन्दले समस्या निम्त्याउने हुँदा योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला । आलोचकहरूलाई पनि व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुहोला । मिहिनेत गर्दा नियमित काम सम्पादन हुनेछन् । स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुराउनुहोला ।
कामको अवसर प्राप्त भए पनि विशेष भेटघाट र शिष्टाचारले अलमल्याउन सक्छ । तापनि प्रबल इच्छाशक्तिले लक्ष्यमा पुराउनेछ । लगनशीलताले नयाँनयाँ काम गर्ने अवसर समेत दिलाउनेछ । बलजफ्ती गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउला । विवादास्पद कामको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दा धन लाभ भए पनि आत्मसम्मानमा बाधा पर्न सक्छ । मनोरञ्जनमा खर्च बढ्नेछ ।
परिस्थितिले आँटेका काममा बाधा पुराउन सक्छ । वैधानिक प्रावधानले केही अप्ठ्यारो पार्नेछ भने अधिकार सुरक्षा गर्न जुट्नु पर्नेछ । सानातिना काममै अल्झनु पर्नेछ । पहिलेका समस्या दोहोरिन सक्छन् । तापनि मिहिनेत गर्दा नियमित काम बन्नेछन् । थोरै भए पनि दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ । केही चुनौती देखिए पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक संकेत प्राप्त हुनेछ ।
प्रयत्न गर्दा चिताएका काम सम्पादन हुनेछन् । सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ । अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ । सहपाठीहरू पछि पर्नेछन् । मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ । व्यापारमा धेरै फाइदा नभए पनि पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ । सन्तान वा अनुयायीको साथले पनि हिम्मत जगाउने छ ।
परिवेश सामान्य रहे पनि मनको डरले भने सताउने छ । ठूला व्यक्तिहरूसँग मतभेद रहने छ । बाहिर आलोचना गर्नेहरूले व्यवहारमा अवसर प्रदान गर्नेछन् । परिस्थितिवश सामान्य काममा बढी अलमल हुनेछ । आफ्ना कमजोरी बाहिरिने समय भएकाले गोपनीयतामा ध्यान पुराउनु होला । अरूको मुख नताकी कर्मयोगमा लाग्दा फाइदा उठाउन सकिने छ ।
निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुने समय रहेकाले हतारमा निर्णय नलिनु होला । साथीभाइसँग असमझदारी बढ्नाले पहिलेको सम्झौता भंग हुनसक्छ । नियमित काम सम्पादन भए पनि सहयोगीहरू पछि हट्न सक्छन् । आँटेको काममा पनि केही व्यवधान हुनेछ । प्रयत्न गर्दा भौतिक साधन जुटाउन सकिनेछ । सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउने छ ।
अवसर प्राप्त भए पनि अरूको भर पर्दा प्रभावकारी काम नहुन सक्छ । आत्मविश्वासको कमीले काममा पछि परिने छ । शुभचिन्तकहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइने छ । खर्च हुने डरले सताउन सक्छ । आफ्ना सूचनासम्बन्धी गोपनीयतामा ध्यान पुराउनु होला । बुद्धिको उपयोगले केही काम सम्पादन हुनेछन् । मिहिनेतले विद्या तथा धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
प्रतीक्षित नतिजा प्राप्त गर्न काम दोहोराउनु पर्ला । स्वास्थ्यका कारण लक्ष्यमा पुग्न समस्या पर्नेछ । अरूका लागि बुद्धि र समय खर्चनु पर्ला । तापनि, लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ । काम पूरा नभए पनि आंशिक फाइदा हुनेछ । आगन्तुकले व्यर्थैमा अलमल्याउन सक्छन् । पार्टी–भोजको अवसर प्राप्त भए पनि स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सचेत रहनु होला ।
समयमा होस नपुग्नाले आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । घर खर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभाव देखा पर्नेछ । तापनि विदेश भ्रमणका लागि प्रयत्न गर्ने समय छ । अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपरे पनि मिहिनेतको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । दोहोराएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको काम सम्पादन हुन सक्छ । परिस्थितिवश सामान्य काममा बढी अलमल हुनेछ ।
आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् भने उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ । मिहिनेतले आम्दानी बढाउने छ । श्रमको उचित मूल्यांकन होला । कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा मनग्य लाभ हुनेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ । अध्ययनमा राम्रै प्रगति हुनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने समय छ । सञ्चित धनको उपयोगबाट विशेष फाइदा हुनेछ । दिन उत्साहवद्र्धक रहनेछ ।
बाध्यतामा अलमलिनु पर्दा चिताएको काममा बाधा आउला । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउनेछन् भने पहिलेका सहयोगीहरू पछि हट्न सक्छन् । अरूका लागि बुद्धि खर्चनु पर्नेछ । जीवनशैली व्यस्त रहनेछ तर उपलब्धिविहीन काममा समय बित्न सक्छ । गरी आएको कामलाई निरन्तरता दिन सकिने छ । व्यवसायमा फाइदा हुनेछ तर नयाँ काम गर्न समय पर्खनु होला ।
श्रम परे पनि तारिफयोग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सकिने छ । धर्मकर्म तथा सेवामूलक काममा प्रवृत्त भइनेछ । आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ । साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउने छ । दिगो फाइदा हुने योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने छ । सामाजिक दायित्व बढ्ने छ । परिस्थिति अनुकूल हुनाले रोकिएको काम सम्पादन गर्न सकिने छ ।